Amagqwetha osapho osapho lwamazwe aphesheya eNetherlands - Law & More
IGqwetha leShishini loSapho
Law & More Unolwazi olunzulu kunye namava okucebisa nokunceda amashishini aphethwe ngumnini ngaphakathi eNetherlands nakwamanye amazwe. Kwiminyaka edlulileyo siphuhlise ukuqonda okunzulu malunga nento eqhuba amashishini osapho amaDatshi kunye namazwe aphesheya kwaye sinika neengcebiso kwezomthetho kunye nerhafu yokunceda ukubonakalisa nokufezekisa iinjongo zabo.
IMISEBENZI EQESHISWAYO YABASEKHAYA NAMAZWE NGAMAZWE
Sicebisa ngemicimbi yokhuselo lweeasethi nokuba ungayikhusela njani ishishini ngokuchasene nomngcipheko werhafu yomthetho kunye nezezimali, kubandakanya kodwa kungaphelelanga ekunciphiseni kwempembelelo yazo.
Law & More ucebisa ngenkuthalo ekukhetheni ezona zixhobo ezifanelekileyo kunye ezifanelekileyo zerhafu kumashishini osapho nokuba ngaphakathi okanye ngaphakathi eNetherlands kusetyenziswa inani elipheleleyo lamaDatshi kunye neendlela ezahlukeneyo zenkampani ekhoyo.
Sinezakhono zokujongana kakuhle neengxabano zomthetho kunye neengxabano phakathi kwamalungu osapho, abaninizabelo nabaphathi, abaxhamlayo kunye nabaxhasi.
Oochwephesha bethu bacebisa ngokuthengisa ishishini ngelixa bethintela ukuboniswa kwamatyala erhafu yaseDatshi.